Dawladii Islaamka ee ugu dambeysay waxay ka jiri jirtay wadanka maanta la yiraahdo Turkiga horayna loo oran jiray (Adoowlah Al-Cismaaniya). Laakiin waxay ku baahsanayd Caalamul Islaam intiisa kaloo dhan, Masar, Sudaan, Shaam iyo meelo badan oo kale iyadaa ka talin jirtay, Isticmaarkii wuxuu wadaba dawladaasi waa la tirtirray.
Sidaas awgeed waxaan jeclahay inaan taariikhda turkiga waxoogga indinka taataabto, Waa maamulkii ugu dambeeyey ee uu ka taliyo talis islaami ah, markaad taas ogaato qaabkii reer galbeed u galay waxaad ogaan kartaa meelaha kalana sidii loo galay iyo wixii loogu tashaday iyo nooca ay maanta yihiin ayaad tusaalo kugu filan uga qaadan kartaa.
Reer Galbeed mu’aamaraad bay mudo dheer wadeen oo ay ka tashanaayeen sidii ay u dumin lahaayeen dawladii islaamka ee Cismaaniyiinta oo markaas ahayd dawladii Islaamka ugu dambaysay ee ka jirtay arlada, ugu dambayntiina mu’aamaradkii wey dhigeen.
Shirqoolkaas ay wadeen oo uu hogaaminaayo nin ay iyagu soo tooba bareen oo la yidhaahdo: Mustafa Kemal Atatur ahna nin turkish ah.
Inqilaabkani wuxuu dhacay kadib markii uu heshiis la galay reer galbeedka isagoo uu soo diray ninkii la odhan jiray (Ismet Inonu) heshiiskaasi waa heshiiska loo yaqaan Lausanne Agreement (Lausanne waa magaalo Newziland katirsan).
Heshiiska waxaa wada galaayay qolodii wax inqilaabaysay ee Turkidaa iyo wasiir khaarajiyihii Ingiriiska ee Kaasuum la odhan jiray.
Waxay socotay Nov 1922 ilaa Jan 1923.
Hore ayaa marka horeba loo eryay khilafadii Islaamiga ahayd Suldaan Cabdi Xamiid 27 April 1909, laakiin laguma dhawaqin in la baabiiyay khilaafadii Islaamiga ahayd ee ninkale ayuunbay ku badaleen oo koobiya oo aan ahayn mid wax qabanaaya.
Heshiis kii la-lagalay ninkaas wuxuu ka kobnaa 4 qodob oo hadii uu hirgaliyo oo fulo arinkaasi uu dhibaatada dawladiisa oo dhan ay kafaalo qaadi doonaan reer galbeed:
Inaad Khilaafa Islaamiya (maamul Islaam ku dhisan) baabiiso oo aanaan maqal kitaab & Sunah ayaa wax lagu Xukumaa
Inuu ka hortago oo dumiyo wax alle wixii kasta ee laysku dayo in lagu soo celiyo khilaafadii islaamka ahayd
Inuu qaato qaanuunka reer galbeed.
Inuu tirtiro waxyabaha cibaadada Alle ee dadku Alle ku caabudaan sida: soonka, saalada, Xajka,sakada iwm
4 taa shardi markaad qaadato eed fuliso ayaanu ogolnahay inaanu taageero dhamaystiran ku siino, wuxuu qaatay 4 tii shardi.
Markaas 03 March1924 ayaa inqilaab lagu sameeyay dawladii islmaaiga ahayd ee Turkiga, waxaana lagu dhawaaqay oo la cadeeyay fikrada maanta loo yaqaano Jamhuuriyada Turkiga. Figrada Jamhuuriga ah maalintaas baa la bilaabay waa 83 sano ka hor. Markii u horeesayba Maxaakiimtii Sharciga iyo Awqaaftii Islaamka ahayd buu baabiiyey.
Kadib 1925 kii ayuu soo saaray qanuun madnuucaaya dhaqanka islaamka dhamaantii sida: Gabadhu inay xijaab qaadato, ninku inuu koofiyada, Cumaamada islaamka xidho iyo wixii dadka islaamka dhaqan u ahaa oo dhan, waxaana la amray inay dadku qaataan dhaqanka reer galbeedka oo ragu qaataan koofiyadaha fuqa dhuuban leh ee shirkadaha reer galbeedku sameeyaan kano tago tan islaamku qaato ee cad.
…. ANIGA MA LIHI QORAALKAN….
inagala soo xariir
facebook maanow raage